Kedu otu enweghị azịza mmekọrịta mmadụ na ibe ya si emebi azụmahịa gị | Martech Zone
Monday, August 3, 2015 Satọde, Ọgọstụ 1, 2015 Douglas Karr
Anyị atụleela mmetụta azụmahịa nke ndị ahịa adịghị mma n'ihe gbasara mgbasa ozi. Gịnị banyere nanị ịzaghachi? You mara na 7 n’ime ozi mmekọrịta mmadụ asatọ a na-agwa ndị a na-azaghị n’ime awa iri asaa na abụọ? Compound na eziokwu enwere 8% mmụba na ozi na ụdị ụwa (72% na United States) na anyị nwere ezigbo nsogbu na aka anyị.
N'ime ya kachasị nso Ndepụta nke mmekọrịta ọha, ha agbakọwo na pasent 40 nke ozi chọrọ nzaghachi. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, pasent 40 nke ndị ahịa na-ahapụ akara maka ọrụ ahịa na-adịghị mma. Na akuku azu, uzo ndi soro ndi ahia rita ahia site na netiti ndi mmadu na enweta ihe ruru iri ato na ato na ha Ntụle Ọkwá Ngwá Ọrụ.
Sprout Social Index bụ akụkọ chịkọtara ma wepụta site na Sprout Social. Ihe ndekọ ederede niile dabere na profaịlụ mmekọrịta ọha na eze nke 97K (52K Facebook, 45K Twitter) nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti Q2 2014 na Q2 2015. E nyochara ihe karịrị nde 200 ozi ezigara n'oge ahụ maka ebumnuche nke akụkọ a. Datafọdụ data sitere na Q1 2013 na Q4 2013 nwere ike gbanwee site na akụkọ ikpeazụ nke Sprout Social Index n'ihi ngbanwe na profaịlụ mmekọrịta mmadụ enyocha; otu osila dị, usoro nile karịrị akarị na-agbanwe agbanwe.
Ndụmọdụ a na-akpọ Sprout Social na mbipụta a bụ maka ụdị iji jikọta ha njikwa elekọta mmadụ na a ahịa n'elu ikpo okwu ka ndị otu gị nwee ike ikenye ọrụ dịka ha si dị, ndị ziri ezi nwere ike ịzaghachi. a ana achi achi na-elekọta mmadụ media mmelite eduzi na ụdị-ebute a ahịa ọrụ arịrịọ e kenyere ka a kpọmkwem ahịa ọrụ nnọchiteanya.
Ndụmọdụ m ọzọ ga-abụ iji hụ na enyere onye ọ bụla na-aza site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ikike iji hụ na edozi nsogbu ngwa ngwa na nke ọma. Can'tnweghị ike ịnwe oge igbu oge na nzaghachi na nzukọ ọha na eze yana sistemụ chọrọ ka tiketi zigharịa ma gafee maka ịgbazi.
Tags: nzaghachi ndị ahịaelekọta ndị ahịa elekọtaọrụ ndị ahịanzaghachi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụpuo na-elekọta mmadụ